मंगलबार, माघ ६, २०७७ ०१:२७:०६ युनिकोड
आइतवार, असार २८, २०७७ विचार
डा. शंकर कुवर बुढाकोट
आज नेपालमा भारत विरुद्ध एक नकारात्मक सोच बढ्दै गएको छ, जो नयाँ प्रवृति नभएर दशकौँ पुरानो हो। हरेक कालखण्डका भारतीय सरकारहरुले नेपाललाई आफ्नो सोच अनुसार चलाउन खोजे। सेकुलरीज्ममा विश्वास गर्ने भारतिय सरकारले नेपालमा राजतन्र सिध्याएर धर्म निरपेक्ष बनाउन खोजे र बनाउनमा मदत गरे भने, हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने सरकारले राजतन्र फर्काउन खोज्दै, आफ्ना अभिमानि दुतहरुबाट सरकार प्रमुख प्रति अनादार गराए, अनडिक्लेर्ड नाकाबन्दी गरे, देशमा भाई–भाई लडाउन खोजे। भारतले नेपाललाई भकुण्डो बनायो, कुनै सरकारले कता हान्यो त कुनै सरकारले कता। नेपालको अहिलेको दुर्दशाको मुख्य अपराधी त भकुण्डो भै खेलिने हामी नेपाली नै हौ तर भारत पनि यो पापको एक प्रमुख दोशी हो। भारतले आफ्नो स्वतन्तरता पछि प्रत्यक्ष युद्ध गरेका दुई देशहरु मध्य चीन एक हो। भारतले चीनलाई मित्र राष्ट्र नभै शत्रुराष्ट्र घोसित गरेको छ। इति बेला उसको चीन विरुद्धको द्वन्द चरम सिमामा छ। सन् १९६२ को हार पछि, भारतीयहरुमा चीन प्रतिको धृणा सुप्तज्बालामुखी (sleeping volcano) को रुपमा रहेको छ। भारत–चीन सिमामा अहिले दुई देशका सैन्य बिच अनडिक्लेर्ड युद्ध छ।
२० भारतिय सैनिकहरुको जीवन गएको छ भने चिनिया सैनिकहरु पनि हताहत भएका खबरहरु छन। यी देशहरुको एक अर्का प्रतिको धृणा चरम सिमामा भै परिस्थिती यस्तो छ की दुबै देशहरु युद्दको तयारी गरि रहेका छन्, र युद्धको सम्भावना पनि छ। भारतले नेपाललाई भौगोलिक र सास्कृतिक निकटताको कारणले आफ्नो सुरक्षा धेरा भित्र राखेर एक निसर्त, प्राकृतिक सहयोगीको रुपमा लिन्छ भने भारतको त्यो व्यवहारलाई नेपालले आफु प्रतिको हेपाई वा आफ्नो स्वतन्त्रता माथिको धातको रुपमा लिन्छ। हाल विश्व का नामी पत्रिका हरुमा नेपाल को नाम यत्र तत्र देखियो। नेपालको नाम भारत र चीनको विचको द्धन्दमा चीनको सहयोगीको भुमिकामा देखियो। हाम्रा प्रतिनिधि हरुले यो बेला दसकौं देखि थान्किएको सीमा विवादको नक्शा सच्चाए र अरु विदेशी विबाह कानुन, जसबाट नेपालीसंग विबाह गर्ने भारतिय नागरिक पिडित हुन्छन्, बनाउने कोसिस गरे। यि विषयहरु सहि नै भए पनि यो समयमा भारतवासी प्रति घाउमा नुन छरे जस्तो भएको छ। हामी भन्ने गर्छौ हामी भारतीय सरकारको नितिको विरोध गर्छौ तर भारतीय जनता प्रति हाम्रो स्नेह छ। तर यस बेला भारतमा चीन प्रति यति दुर्भावना छ कि उनीहरु आफ्नो सरकार विरुद्ध गरेको कुनै निर्णय आफ्नो मानिरहेका छन्। यो हाम्रो लागी खतरनाक छ।
निर्णय सहि वा गलत महत्व राख्छ। तर त्यो भन्दा पनि सहि समयमा गरिएको निर्णय महत्व राख्छ। बुद्ध, जो भारत र नेपालका साझा धरोहर हुन, ले भनेका छन्, कालवादी, भूतवादी, अत्थवादी, धम्मवादी, विनयवादी। अर्थात् सत्य बोलि–व्यवहार, अर्थपुर्ण बोलि–व्यवहार, प्रासंगिक बोलि–व्यवहार, बिनम्र बोलि–व्यवहार समय जानेर उचित समयमा मात्र बोल्नु र गर्नु पर्छ। नेपालका नेताहरुको निर्णय सहि भए पनि गलत समयमा गरिएको छ। यसको दूरगामी परिणाम आउने छ जो देशको हितमा हुने छैन।
दशकौं देखि नेपाली जनताले, नेपालको संकटको एक कारक भारतको नेपाल माथीको नीति बनाई, मनमा भारतका सासक प्रति एक तनाब पालेको छ। नेपालका नेताहरुले त्यो तनावलाई मापेर यो निर्णय गरेको देखिएको छ। नेताको भुमिका जनतालाई उक्साउने वा जनताको सम्वेदनशिलता माथि राजनीति गर्ने भन्दा जनतालाई अहितकारक धृणाबाट बचाउने हुनु पर्छ। ७०५ भन्दा कम साक्षरता भयको देशमा जनताको संवेदनशिलता संग खेल्न गाह्रो छैन। हरेक ले अफनों हित र अहित छुट्टयाउन जान्नु पर्छ। सत्य पनि असमयमा बोल्दा खतरनाक परिणाम ल्याउन सक्छ। हाम्रा नेताहरुका अनेक कालखण्डमा गरिएका यस्तै अदुरदर्शि निर्णयको परिणाम त हामी अहिले भोगि रहेका छौ। नयां नक्सा विवाद पनि त्यसकै एक कडी हो। हाम्रै कुनै नेताहरुको अदुरदृष्टिक निर्णयको कारण त त्यो भुमि आज हाम्रो नक्सामा छैन।
के हामीले यसको अध्यान गरेका छौ? भारतले यो भुमि किन लियो? कहिले लियो? त्यो भुभाग नेपालको नक्सामा किन थियन? पहिला थियो भने कहिले देखि हट्यो र कसले हटायो? जसरी हाम्रा कुनै नेताले नक्साबाट भुमि हटाउने गलत निर्णय गरेका थिय, आज त्यो भुमि नक्सामा जोड्ने सहि निर्णय पनि गलत समयमा गरिएकोले दुखद परिणाम आउन सक्छ। देश महात्मा गान्धी जस्ता सन्तले चलाएका हुँदैनन्। रिस, राग, द्वेष, इर्षा, अभिमान र प्रतिसोधको भावना जस्ता अवगुण भएका मानिसहरुले चलाउने हो देश। यो याद गर्नु।
भनिन्छ श्रीमतीलाई पशुपतिनाथ प्रवेश निषेध गर्दा भारतीय एक प्रधानमंत्री ले स्वीट्जÞरल्याण्ड बन्न खोज्ने देश नेपाललाई एक लगभग असफल देश बनाई दिए। तत्कालीन नेपाली शासकको सत्ता मात्र हैन वंसज नै नाश भयो। त्यहि घटना देखि सुरु भएको नेपालको उथलपुथलले आज नेपाललाई एसियाको सब भन्दा गरीब देश बनायो। नेताले सहि गलत छुट्ट्याउने मात्र हैन, आफ्नु निर्णयको दूरगामी परिणाम देख्न सक्नु पर्छ। भारतलाई शत्रु देशले घात गर्दा उसको शत्रु सँग गएर उभिनु कदापि बुद्धिमता हुन सक्दैन। एक मान्छेको गलत निर्णयले उसको जिबनमा दुख आउँछ तर देश चलाउने नेताको गलत निर्णयले पुरै देश माथि संकट आउँछ। अहिले हाम्रो देश जुन स्तिथिमा छ त्यो नेताहरुको श्रृंखलावद्ध अनुचित समयमा लियका अनुचित निर्णयको परिणाम हो। भारतका सासकहरुले यो गलत समयमा गरिएको निर्णयको प्रतिसोध नलेलान भन्न सकिदैन। २६ जुन २०२० मा विरेन्द्र कपुर (Virendra Kapoor) ले रेडिफ न्यजमा चीनको विषयमा लेखेको एक लेखको हाईलाईट यस प्रकार छ ः “जो कोहि मोदीको ट्र्याक रेकर्डसंग परिचित छन्, उनीहरुलाई थाह छ, मोदी रत्तिभर धोका पनि क्षमा गर्दैनन्।”
आशा गरौ मोदीको कहर नेपाली जनतामा पर्ने छैन। नेपालका नेताहरुले एकजुट भएर गरेको यो लोकप्रिय निर्णयको नेपाललाई कुनै फायदा देखिदैन। हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ। खोक्रो राष्ट्रियताले आजसम्म समस्या मात्र निमत्याको छ, प्रथम देखि दोस्रो विस्वयुद्धको जर्मनीलाई हेर्नु होस्। द्यशकौँ देखि नक्शाबाट हटाइएको भूभाग यस्तो कुसमयमा, जब भारतको चीनसंगको विवाद चरममा पुगेको छ, त्यति बेला विवादित बनाउनु को पछि या हाम्रा नेताहरुको अदुरदृष्टिता छ, या त उनीहरु कथित रुपमा चिनतिर झुकेका छन्। ८०% भन्दा बढ़ी जो देशसंग आर्थिक निर्भारता छ त्यसै देशसँग उसलाई अप्ठेरो परेको बेला सींग हान्नु कतिको बुद्धिमता हो आफै बुझौँ। हरेक देश को राष्ट्रहित (Virendra Kapoor) हुन्छ। नेपालको नककशनल इंटरेस्ट कुनै हालतमा पनि भारतसंग यो बेला सीमा बिबाद गर्नु हुन सक्दैन। आफ्नो शक्ति जानेर चिनेर आफ्नु बचाब गर्नुमा बुद्धिमता हुन्छ। ठीक बेठीक को तर्क सबै ठाउमा लागु हुदैन। ड्राइविंगमा एउटा टर्म हुन्छः डिफेंसिव ड्राइविंग। त्यसको अर्थ हो, ड्राइवरले आफुले नियम पालन गरेर ढुक्क भएर ड्राइविंग गरेर पुग्दैन। उसले अर्को ड्राइवरले नियम तोड्न सक्छ भन्ने सोचि सचेत भएर गाड़ी चलाउनु पर्छ। हाम्रा नेताहरुले आजसम्म डिफेंसिव ड्राइविंग गरेको इतिहास छैन त्यसैले हाम्रो देशको दुर्दशा छ। अब सुधार नगरे स्थिति झनै खतरनाक हुन सक्छ। भारतले गरेको नकाबन्दिको नेपालको जुझाइ सबैले मन पराए। भारतवासीबाट पनि सहयोग पाइयो। ओली जी हिरो भए। किन? किनकी भारत गलत थियो। तर हरेक जुझाइ एउटै हुदैन। यो समयमा अधिकांस भारत एकजुट छ, किनकि उनीहरुको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न छ।
नाकान्दिमा बुद्धिमान (sane voice) भारतीयहरुले भारत सरकारको बिरोध गरेर नेपालीलाई साथ दिएका थिए अहिले हामी नेपालीले भारतलाई साथ दिन आवश्यक छ। हो, नेपालको भारत विरोधी भावनाको पछि भारतीय नेताहरुको गलत नीति र सेवा–भन्दा–सजायेमा आधारित आउटडेटेड ब्रिटिश इंडिया ब्यूरोक्रेसी हुन्। तर हाम्रो पनि गल्ती छ। हामीले हाम्रो हित जान्न सकेनौ। हामीले आफ्नो हित जोगाउन सकेनौ। हाम्रा नेताहरु राष्ट्रहित जोगाउन सक्ने बुद्धिमान भएनन्। कसैले हामीलाई हानी गर्छ भने त्यसमा हाम्रो पनि सुरक्षा गर्न नसक्नु एक कमजोरी देखिन्छ। हाम्रा भारतसंगका मत भिन्नताहरु चीन विवाद सकिए पछि राख्नु पर्छ। हाम्रो एक्शनले जानी अन्जानी चीनको नेरेटिव सपोर्ट गरेका छ।
त्यो भारतलाई सहन हुने छैन। हाम्रो देशमा चीनलाई भारत भन्दा अति गुणवान देश भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। त्यो कदापि हैन। चीनको डरले त्रसित साउथ चाइना समुन्द्रमा धेरै साना साना देशहरु छन्। ताईबानलाई एक छिन छोडौ जसलाई हामी चिनको अंग मान्छौ, दक्षिणी चिन सागरका (south china Sea) वियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्रुनाई जस्ता साना साना देशहरु चिनसंग थर्कमान छन्। यदि चिनको चरित्र साना छिमेकिलाई आदर गर्ने हो भने ती देशमा त्यो किन लागु हुदैन? किनकि नेपालसंग असल बन्नमा नै चीनको राष्ट्रहित छ। देशहरु चरित्रको आधार भन्दा नेशनल इन्ट्रेस्टको आधार काम गर्छन्। हामी सेंटीमेंटको आधारमा काम गर्छौ। हामीले पनि नेशनल इंटरेस्टको आधारमा काम गरी ठूला देशहरुको जुधाईको बिचमा नआउन मै हाम्रो हित छ। नेपाललाई चिनले सामरिक साझेदारको रुपमा लिएको छैन भन्नेहरु पनि छन्।
तिनीहरुले, चिन कमनिस्ट पार्टीको मुखपत्र रहेको ग्वोलबल टाईम्समा हु झियोङ उदाहरण लेखेको लेख पढेका छैनन् होला। झियोङ भन्छन्ः “भारत एक्कै चोटि चिन, पाकिस्तान र नेपालसंग सिमा बिबादमा छ। पाकिस्तान चिनको सामरिक साझेदार भएको र नेपालसंग पनि चिनको कुसल सम्बन्ध भयको र दुबै देश बेल्टरोडका साझेदार भएकोले भारतले उक्सायको खण्डमा उसले दुई वा तीन तिरबाट सैन्य कार्बाही झेल्न सक्छ जो भारतको सैन्यशक्तिको क्षमता भन्दा धेरै बढि हुनेछ र भारतले आपदायिक पराजय भोग्ने छ।” यो लेखमा प्रष्ट छ उनले नेपाललाई भारत बिरुद्ध, चिन र पाकिस्तानको साथमा उतारेको छ। यो भनाई कति खतरनाक छ भने म स्तब्ध छु, त्रसित छु, कि कर्तब्य बिमुढ छु। यो भनाईबाट भारतिय टिभि चेनलका कन्पिरेसि थ्योरि, जो भन्ने गर्छन्। नेपाल चिनद्वारा संचालित छ, लाई मदत पुग्दैन? के भारत विरुद्ध चिनको साथ दिएर हामी हाम्रो अस्तित्व जोगाउन सक्छौ? हामी मध्ये कतिलाई थाहा छ, नेपाल र भारतको सेना प्रमुख एक अर्का सेनाका प्रमुख हुन्छन्। भारत माथिको आक्रमण नेपाली सेनाले नेपाल माथिको आक्रमणको रुपमा लिनु पर्छ। हाम्रा सबै देश मित्र देश हुन्। हामी सत्रुता माथी विश्वास गर्दैनौ।
चीन पनि हाम्रो मित्र देशहो तर भारतसंगको हाम्रो सम्बन्ध अतुलनिय छ। हामीलाई भारत प्रति गुनासाहरु छन्। उसले गरेको कति व्यवहार सम्झिदा चित्त दुख्छ। तर उसलाई हानी गर्ने, धात गर्ने र उसका सत्रुहरुको श्रेणिमा उत्रने कुरा सोच्न पनि सकिन्न। एक तिर भारतले हाम्रो फाईदा उठाएको मानेर चित्त दुखाउने नेपालीहरु छन्, भने अर्को तिर हामीले आफ्नै देशको नागरिक सरह राख्दा पनि नेपालीले हामीलाई मन पराउदैन भनेर चित्त दुखाउने भारतीयहरु छन्। म अलग सोच राख्छु। हामी नेपालीका कुनै पनि कालखण्डका नेताहरुले कुसल कुटनिति गरि, भारतसंग राम्रो डिल गरेर हाम्रो हितमा निर्णय गर्न सकेनन्। भारतका नेताहरु हाम्रो देश प्रति जवाफदायी हुदैनन्। हाम्रा नेताहरुको अदुरदर्शिता हाम्रो अवनतिको कारण हो। जबसम्म हामी आफ्नो जिम्मेबारीको लेखाजोखा राखेर सोचि सम्झी कदम चाल्दैनौ र सधै अर्कालाई दोषी बनाई हिड्छौ, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउने छैन। अन्तमा फेरि बुद्धवचनः “खन्ति परमं तपो तितिक्खा” अर्थात् क्षमानै परम तप हो जसलाई सहनशिलताको नामले चिनिन्छ। बुद्धले किन भने त क्षमा परम तप हो? किनकि क्षमा धृणाको विपरित हो र धृणाले आफ्नै बिनास गर्छ। धृणा हाम्रो शभ्यतामा न्युनतम स्थान राख्छ। भारतबाट हामीले जति पाएका छौ त्यो कुनै देशबाट पनि पाएका छैनौ। हामी भारतसंग कृतज्ञ हुनै पर्छ। नजिक भएकोले एक अर्काबाट चित्त दुख्यो होला। भोलि हामी दुबै देशका सन्तनाहरु बढि भन्दा बढि सभ्य होलान् र एक अर्कालाई दुख पुगाउनुको सट्टा सहयोग गर्लान्। हामी आदिकाल देखिसंग थियौँ। यो भुमि अनादीकालसम्म संगै रहनेछ।
अहिले हामीले एक अर्काको गल्तीहरु क्षमा गरेर धृणालाई जित्नु छ। जनताको संवेदनशिलताको आधारमा नेताहरुले निर्णय गरेका छन्। म न त निसर्त भारतको साथ दिने मान्छे हुँ। न म अहिलेको बहुमतिय लोकप्रीय निर्णयसंग नै सहमत छु। म तर्क संगिक, युक्ति संगिक भएर तेस्रो धारणा राख्छु। भारतसंग नेपालको तराई तिर रोटी र पहाड तिर छोरीको नाता छ। लगभग एक करोड नेपाली भारतमा निर्भर छन्। लाखौ नेपाली मुलका मानिसहरु भारतमा धरजम गरेर बसेका छन्। धेरै नेपालीलाई चाईनाको मोबाईल किन्न भारतको कामबाट आर्जित पैसा चाहिन्छ। यस कथनबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो भारतसंग कस्तो सम्बन्ध छ र चीनसंग कस्तो छ। हामी भुपरिवेष्ठित नभै भारतपरिवेष्ठित (India locked) छौ। भारतसंगको हाम्रो सम्बन्ध अनुत्तर, अतुलनिय र प्राकृतिक छ। यसको रक्षा गर्न हरेक नेपालीको र भारतीयको धर्म हो।
प्रकाशित मिति: आइतवार, असार २८, २०७७, ०३:३१:००